Wararka - Codsiga zeolite ee warshadaha dhismaha dhismaha
Sababtoo ah culeyska khafiifka ah ee zeolite, macdanta zeolite dabiiciga ah ayaa loo isticmaalay qalab dhisme boqolaal sano. Waqtigan xaadirka ah, zeolite waa nooc cusub oo ah agab bey'adda u fiican, waxayna warshaduhu ogaadeen faa'iidooyinka ay leedahay in la isticmaalo zeolite tayo sare leh/daahir ah si loo soo saaro alaabo qiimo leh. Faa'iidooyinkeedu kuma koobna wax soo saarka sibidhka, laakiin sidoo kale waxay khuseysaa shamiitada, hoobiye, xoqidda, rinjiga, nuuradda, laamiga, dhoobada, dahaarka iyo dhejiska.
1. Sibidhka, shubka iyo dhismaha
Macdanta zeolite dabiiciga ah waa nooc ka mid ah walxaha pozzolanic. Marka loo eego heerka Yurub ee EN197-1, agabyada pozzolanic waxaa loo kala saaraa inay ka mid yihiin qaybaha ugu waaweyn ee sibidhka. “Qalabka Pozzolanic ma adkaan doono marka lagu qaso biyo, laakiin marka si fiican dhulka loo dhigo iyo marka ay biyuhu joogaan, waxay ka falceliyaan Ca (OH) 2 heerkulka caadiga ah ee caadiga ah si ay u sameeyaan hormar xoog leh Calcium silicate iyo calcium aluminate xeryahooda. Xeryahannadani waxay la mid yihiin xeryahooda la sameeyay intii lagu adkaynayay qalabka hidaha. Pozzolans waxay inta badan ka kooban yihiin SiO2 iyo Al2O3, inta soo hartayna waxaa ku jira Fe2O3 iyo oxides kale. Saamiga kaalshiyamka kaalshiyamka firfircoon ee loo isticmaalo adkaynta waa la iska indho tiri karaa. Waxyaabaha ku jira silica firfircoon waa inaysan ka yarayn 25.0% (cuf). ”
Guryaha pozzolanic iyo maadada silica sare ee zeolite waxay hagaajisaa waxqabadka sibidhka. Zeolite wuxuu u shaqeeyaa sidii dejiye si uu u kordhiyo dheef-shiid kiimikaadka, u gaaro hawlgal wanaagsan iyo xasillooni, iyo inuu yareeyo falcelinta alkali-silica. Zeolite wuxuu kor u qaadi karaa adkaanta shubka wuxuuna ka hortagi karaa sameynta dildilaaca. Waxay beddel u tahay sibidhka Portland ee caadiga ah waxaana loo isticmaalaa in lagu soo saaro sibidhka Portland-ka u adkaysta.
Waa ilaaliye dabiici ah. Ka sokow sulfate iyo iska -caabbinta daxalka, zeolite wuxuu kaloo yareyn karaa waxa ku jira chromium -ka sibidhka iyo shubka, wuxuu hagaajin karaa iska caabbinta kiimikada ee codsiyada biyaha cusbada wuxuuna ka hortagi karaa daxalka biyaha hoostiisa. Adigoo isticmaalaya zeolite, xaddiga sibidhka lagu daray waa la dhimi karaa iyada oo aan lumin xoog. Waxay gacan ka geysaneysaa yareynta kharashaadka wax -soo -saarka iyo yareynta qiiqa kaarboon laba ogsaydhka inta lagu jiro habka wax soo saarka
2. Maaddooyinka, marada iyo koolada
Midabada deegaanka, rinjiga iyo dhejiska ayaa maalinba maalinta ka dambaysa aad caan u noqonaya. Macdanta zeolite -ka dabiiciga ah waa mid ka mid ah waxyaabaha la doorbidayo ee loogu talagalay alaabooyinkan deegaanka. Ku -daridda zeolite waxay bixin kartaa badeecado bey'adda u wanaagsan waxayna siin kartaa jawi caafimaad iyo ammaan leh. Sababtoo ah awoodda sarrifka kaashka sare, zeolite-clinoptilolite ayaa si fudud u baabi'in karta urta iyo hagaajinta tayada hawada ee deegaanka. Zeolite waxay aad ugu dhowdahay urta, waxayna nuugi kartaa gaasas badan oo aan fiicnayn, ur iyo ur, sida: sigaarka, saliidda shiil, cuntada quruntay, ammonia, gaaska bullaacadaha, iwm.
Zeolite waa qalajiye dabiici ah. Qaab dhismeedkiisu aad u daloola ayaa u oggolaanaya inuu nuugo ilaa 50% culeyska biyaha. Alaabooyinka ay ku jiraan waxyaabaha lagu daro zeolite waxay leeyihiin iska caabin caaryar oo sareysa. Zeolite wuxuu ka hortagaa sameynta caaryada iyo bakteeriyada. Waxay hagaajineysaa tayada deegaanka iyo hawo -mareenka.
Zeolite waa aluminosilicate biyo leh oo leh qaab dhismeedkiisu aad u badan yahay. Si fudud ayaa loo waraabiyaa oo loo fuuqaa. Waxay leedahay faa'iidooyin dhowr ah oo loogu talagalay laamiga isku-dhafan ee heerkulka sare: ku-daridda zeolite waxay yareysaa heerkulka looga baahan yahay in laami laami ah la saaro; laami la isku daray zeolite wuxuu muujinayaa xasiloonida sare ee loo baahan yahay iyo xoogga sare ee heerkulka hoose; Badbaadi tamarta adiga oo yareynaya heerkulka looga baahan yahay wax soo saarka; yaree qiiqa kaarboon laba ogsaydh ee geedi socodka wax soo saarka; baabi'i urta, uumiga iyo aerosols -ka.
Marka la soo koobo, zeolite wuxuu leeyahay qaab dhismeed aad u liidata iyo awoodda is -weydaarsiga wax -ka -beddelka, waxaana loo adeegsan karaa dhoobada, lebenkii, insulators, sagxadda iyo alaabta dahaarka leh. Hagaajiye ahaan, zeolite wuxuu kordhin karaa xoogga, dabacsanaanta iyo dabacsanaanta badeecada, sidoo kale wuxuu u dhaqmi karaa sidii caqabad kuleylka iyo dahaarka dhawaaqa.
Waqtiga dhejinta: Jul-09-2021